ka Qaybqaado Dhismaha Masaajidka Al Hudda
SOMALITALK - AL-HUDA
GAROOWE : Dhismaha Masaajidka AL-huddaa
Garoowe:- June 18, 2007: Walaalkayga iyo Walaashayda Muslimka ahoow ka qaybqaado Masaajidka AL-Huddaa ee Garoowe , kaa soo iminka la burburiyay waxaana loo badalayaa dhisme 2 dabakh ah.
Sheikh C/qaadir Nuur Faarax Jeex oo ka mid ah Culimada caanka ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu Muslimiinta ugu baaqayaa in ay ka qaybqaataan dhismaha Masaajidka , wuxuuna sheegay in ay tahay sadaqo jaari ah oo aan waligeed ka go’ayn ruuxii wax ku darsada dhismaha masaajidka.
Walaalka iyo walaasha Muslimka ahoow,sadaqadii aad la baxday waad aragtaa siday uga muuqato masjidlka oo dhow-dhow.
oo aad u quruxbadan , walaalka iyo walaasha aan horay uga qayb-qaadana waxay gaarsiinayaan sidaan si ka qurux-badan.
Waxaa soo gud-biyey Maxamuud Cumar Bille
GAROOWE : Walaal ka Qaybqaado Dhismaha Masaajidka AL-Hudda
Garoowe:- Walaalkayga iyo Walaashayda Muslimka ahoow ka qaybqaado Masaajidka AL-Huddaa ee Garoowe , kaa soo iminka la burburiyay waxaana loo badalayaa dhisme 2 dabakh ah waxaana dhamaaday dabakhii hoose oo ay ku baxday lacag dhan $60,000.
Sheikh C/qaadir Nuur Faarax Jeex oo ka mid ah Culimada caanka ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu Muslimiinta ugu baaqayaa in ay ka qaybqaataan dhismaha Masaajidka , wuxuuna sheegay in ay tahay sadaqo jaari ah oo aan waligeed ka go'ayn ruuxii wax ku darsada dhismaha masaajidka.
Sheekhu wuxuu sheegay Misaajid laga qaybqaato dhismihiisa in ay tahay waxyaalaha khayrka badan oo aan waligiis ka go'ayn.
Sida uu sheekhu sheegay Masjidul-hudaa wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada , sababta keentay in xiligan la burburiyo ayuu ku sheegay in ay timid baahi aad u wayn maadaama uu qaadi waayay dadka Muslimka ah ee ku tukada salaadaha.
Waxaana laga dhigayaa 2 dabakh taas oo ay ugu wacan tahay masaajidka oo aan lahayn dhul uu ku fido sidaasdarteedna ay lagama maarmaan ay noqotay in la is-dulsaaro.
Sheekhu wuxuu sheegay in qaybta hore Masaajidka a ku baxayso oo lagu qiimeeyay lacag dhan $154,000 , iminkana la hayo.
: sidaas darteed loo baahan yahay in ay musimiintu ay soo dhamaystiraan inta kale.
Ciddii doonaysa in dar Ilaahay ay ula baxdo sadaqo waxay ku soo diri kartaa Accoonadan
Akoonadaan ama waxay la soo xiriiri kartaa cinwaanadaan teleefoonadaan hoos ku qoran:
Dahabshiil : 000100
Amal : 0704041022501
6. Sheikh Abdulkadir Nor Farah +252-5-746134
7. Yasin Abdullahi Ali +252-5-724462
8. Haji Yusuf Jama +252-5-794245
9. Abdinazir Gureye
10. Bahsir Adur
Waxaa soo gudbiyey Maxamuud Cumar Bille
Warbixintii hore hoos ka akhri....
Contribute Al-Hudda Mosque Building :
AL-hudda is a very large mosque positioned in the center of Garowe, the Capital city of Punt land State of Somalia.
It is wide enough for, as many Muslims as almost 2,000(Two thousand or more to say their prayers in, due to the strategic place in town.
The previous land space of the mosque was 20 x 20 meters sq before; it was destroyed and extended to 36 x 22 metres by adding with new purchased neighboring houses.
The new building of the mosque will be composed of two floors including the foundation one, costing around $154,000(One hundred and Fifty Four Thousand USD).
The first stage of the building which cost $60,000(Sixty Thousand USD only) is more or less complete.
Al-hudda is presently enough for that number of 2,000 Muslims, we mentioned above and can also be extended up to 3,000 worshipers, depending on the finance.
For now, the mosque building running board is asking only $94,000(Ninety Four Thousand for Muslims as contribution.
"To whole Muslim brothers and sisters", please this is dutiful requirement for whole people of Islam any where in the World or being any nationality to add your donations to this place of worship for Allah.
Account Numbers and board contacts:
Prepared by AL-hudda Mosque construction board.
Sheikh Abdulkadir Nor Farah +252-5-746134
Yasin Abdullahi Ali +252-5-724462
Haji Yusuf Jama +252-5-794245
Reporter: Maxamuud Cumar Bille | SomaliTalk
GAROOWE: Markii ugu horeysay oo laga Dhisayo Masaajid Dabaq ah.
Garoowe:-Dhismaha Masaajidka AL-huda ee Garoowe ayaa si caadi ah u socda , wuxuuna uu iminka uu marayaa sida aad ka aragtaan sawirka Mitirkii 2-aad ee qaybta hoose , waxaana Insha'allaah laga dhigayaa dhisme heersare ah oo ka kooban 2 biyaano.
Masaajidka ayaa dhaqaalaha lagu dhisayo uu yahay mid ku tiirsan Muslimiinta ku nool dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaana qofkasta oo Islaam ah oo awooda in uu ka qayb qaato dhismaha masaajidka isaga oo danaysanaya laga filayaa in uu ka qaybqaato.
Sheikh C/qaadir Nuur oo ka mid ah Culimada waawayn ee dalka Soomaaliya , ayaa Muslimiinta ugu baaqaya in ay dhaqaalahooda iyagoo dar Ilaahay kula baxaya ay ku tabarucaan si ay ugu noqoto sadaqo jaari ah oo waarta.
Masjidul- Al-hudaa , ayaa wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada , waxaana la dumiyay ka dib markii uu ku filaan waayey dadka.
Hadaba cidii dhaqaale ku darsanaysa waxay ku soo diri kartaa Accoonadan hoos ku qaran , waxay kaloona la soo xiriiri kartaa magacyada wata talleefoonada.
Sh.C/qaadir Nuur Faarax(dhinaca midigta), Xaaji. Shuluco Xaaji Yuusuf (dhexda) Sh.Yaasiin Cabdullaahi(dhanka bidix).
Shiikhu wuxuu sheegay in qaybta hore ee Masaajidka ay ku baxayso lacag dhan $ 154,000 , iminkana la hayo sida Masaajidka ka muuqata ay la helay lacag dhan $ 50,000 , sidaasdarteed loo baahan yahay in ay mulimiintu ay soo dhamaystiraan inta kale ahaa 104000.
Teleefaonadan la xiriir:
Sheekh C/qaadir Nuur Faarax 00 2525 74 6134
Xaaji Yuusuf Jaamac Dagal (Cambe) 00 2525 79 4245
Yaasiin C/laahi Maamulaha Masjidka 00 2525 72 446